PineNote, Pine64 yakavhurwa sosi eReader inogona kusvika gore rino | Kubva kuLinux
Mamwe mazuva apfuura iyo nharaunda yePine64 (yakatsaurirwa kugadzira zvigadzirwa zvakavhurika) akazivisa kuti ave kutoshanda pabhuku remagetsi «PineNote», izvi mushure memakore akati wandei umo nharaunda yanga ichikumbira kugadzirwa kwechigadzirwa chakadai.
Parizvino izvo zvinongedzo zvinonongedzerwa kunze kwePineNote, ndizvo izvi ichave yakagadzirirwa 10,3 skrini inches kumusoro e-ink base, pamusoro pekuti mudziyo unobva paSoC Rockchip RK3566 ine processor AQuad-musimboti RM Cortex-A55, AI yekuwedzera RK NN (0.8Tops) uye Mali G52 2EE GPU (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0), ichigadzira chishandiso chimwe chemidziyo yepamusoro kuita mukirasi yayo.
Zvave zvichikumbira isu kuti tigadzire e-ink chishandiso kwemakore, uye isu takanyatso tarisa kuti tigadzire imwe kutanga kwa2017. Ini ndinotorangarira pachena ndichikurukura pachena mazano nenhengo dzenharaunda panguva iyoyo nekutsvagisa iyo SoC ingave yakanakira mudziyo zverudzi urwu.
Chigadzirwa chichaendeswa ne 4 GB ye RAM (LPDDR4) uye 128 GB yeMMC flash memory. Iyo 10,3-inch skrini yakavakirwa pahwaro hwemagetsi inki (e-ink), inotsigira resolution ye 1404 × 1872 pixels (227 DPI), 16 shades of grey, backlight ine kusiana kupenya, pamwe nematanho maviri ekuronga zvekuisa : bata. (capacitive girazi) yekubata bata uye EMR (remagetsi remagetsi resonance) yekuisa uchishandisa peni yemagetsi (EMR peni).
PineNote futi ine maikorofoni maviri uye ma speaker maviri ezwi, inotsigira WiFi 802.11 b / g / n / ac (5Ghz) uye yakagadzirirwa USB-C chiteshi uye 4000mAh bhatiri. Iyo bezel yekumberi inogadzirwa nemagnesium alloy uye yekumashure butiro rakagadzirwa nepurasitiki. Chigadzirwa chacho chingori 7mm gobvu.
Panguva iyoyo, isu tanga tichitsvaga kugadzira imwe nzira yekupinda-chikamu Kindle uye mamwe makuru e-evaverengi. Nekudaro, isu takakurumidza kudzidza kuti makuru mabhizimusi anotsigira zvakanyanya mae-kuverenga avo kuburikidza nekutengesa mabhuku uye kunyangwe dai taizotengesa yakavhurika e-kuverenga nemutengo (kana kurasikirwa), isu hatina kukwanisa kuenzanisa mutengo we zvishandiso zvakakurumbira.
Neraki, iyo tekinoroji nzvimbo uye izvo zvinogona kuwanikwa ne e-ink zvachinja zvakanyanya kubvira 2017. Kubva pakaziviswa Rock Rock's RK3566, isu takaziva mukana wedu wekugadzira yakavhurika e-ink chishandiso yakanga yasvika.
Kana chiri chikamu cheiyo Software kudyisa «PineNote» iyi inoenderana nelinux nerutsigiro rweRocketchip RK3566 SoC yaive yatoverengerwa mune huru Linux kernel panguva yekuvandudzwa kweQuartz64 bhodhi.
Iyo e-pepa inoratidzira controller ichiri pasi pekuvandudzwa, asi ichave yakagadzirira kugadzirwa. Izvo zvakarongwa kuti mabatch ekutanga achaburitswa pamwe Manjaro Linux pre-yakaiswa uye Linux kernel 4.19.
Izvo zvakarongwa kushandisa KDE Plasma Mobile kana yakashandurwa zvishoma KDE Plasma desktop desktop setsika yeganda. Nekudaro, kusimudzira kwacho hakusati kwapera uye kuzadziswa kwekupedzisira kwesoftware kunoenderana nekuti matekinoroji akasarudzwa anoita sei pane yemagetsi mapepa-anoratidza.
Mwedzi uno unounza nhau dzekuti vazhinji venyu mamirira kwemakore: Kuunza PineNote, yekumusoro-kumagumo e-ink chishandiso inoenderana ine simba Quartz64 imwechete bhodhi komputa.
Asi nhau dzakanaka hadzigumira pano, iyo PinePhone keyboard yapinda mukugadzirwa, ivo vanogadzira vatanga basa paPinePhone kumashure kesi, kuvandudzwa kwePineDio kuri kufambira mberi uye taona nyowani firmware vhezheni yePinebook Pro touchpad. nzvimbo yakawanda yekuvhara mwedzi uno, saka ngatitorei kune izvo.
Finalmente kune avo vanofarira PineNoteIwe unofanirwa kuziva kuti izvozvi zvirimo mune pre-kugadzirwa prototype nhanho uye iri kuenda kunotengeswa (kana zvese zvikafamba zvakanaka) gore rino pamadhora 399.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » PineNote, Pine64 yakavhurwa sosi eReader inogona kusvika gore rino